Akụkọ - Ndị ahịa Congo na-ejuputa igwe
Nleta ndị ahịa Congo na-ejuputa igwe
N'oge nke ụbọchị nke abụọ China International Expo Expo na Nọvemba, ndị nnọchi anya 2019 nke Africa ga-abịarute Shanghai site na Congo, South Africa. Ndị nwe ha gara leta ma nyochaa igwe ha na-achọ, ụlọ ọrụ anyị bụ ndị na-ebu igwe na-ejuputa ngwa ngwa na nhazi oge ha.
Anyị, Higee Machinery, onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ 20 na-ejuputa na ntinye, ntinye, akara na ntinye igwe maka ụdị ngwaahịa dị iche iche. Anyị bụ ndị ọkachamara na onye nkwụsị ndochi akara ngwọta na-eweta. Na njem azụmahịa ha, ndị ahịa anyị nyochara usoro ọgwụgwọ tupu mmiri, gụnyere quartz sand filter, na-arụsi ọrụ ike-carbon filter, RO system, Ozone sterilizer, tank tank. Ha nwalekwara ịgba ọsọ nke 3 anyị na 1 monoblock cola rinsing, ndochi na capping igwe akara. Na mmechi anyi nwere nzuko gbasara ahia, ahia mbu, ugwo ahia na ahia banyere ire ahia mmiri n’ime ala.
E nwere otu akụkọ sitere n'aka ndị nnọchi anya Africa na Congo na gọọmentị machibidoro onye nrụpụta ahịa na ahịa mpaghara ka ọ mepụta mmiri sachet.
Igwe mmiri Sachet na igwe na-akwakọ ngwaahịa bụ ihe na-ekpo ọkụ na mpaghara ndị ọzọ nke Africa ugbu a, mana ha kwesịrị iche echiche maka ịmepụta akara mmiri mmiri karama n'ọdịnihu.
Ndị nnọchi anya Africa chọpụtara igwe dabara adaba, nụ ụtọ nri ndị China, na-elele igwe elele. Ha na-enye otuto dị mma maka nhazi anyị na 5S na-achịkwa ahụmịhe ha na-aga mgbe ha gara ụlọ ọrụ anyị, ụlọ nzukọ, ngalaba mmepụta, ụlọ nkwakọba ihe na njikwa saịtị. Anyị na-na-akpa nganga na anyị n'ichepụta àgwà na-ahụ n'anya na imekọ ihe ọnụ ọ bụla ọzọ. Higee Machinery, ezigbo nhọrọ gị maka ụdị ihe ọ allụ allụ niile, ihe ọ drinkụ drinkụ na mmiri na-ejuputa mmiri, ịdebanye aha na ntinye nkwakọ ngwaahịa. Mmadụ Bịa na Be anyị! Anyi no ebe a na eche gi!
Post oge: Dec-18-2019